नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : भारतको नयाँ दिल्लीमा अरबिन्द केजरिवालको अाम आदमी पार्टीको विश्वकिर्तिमान कायम गर्ने जित ! काङ्रेस अाइ लाई शुन्य सीट, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी पनि बढारियो !
भारतको नयाँ दिल्लीमा अरबिन्द केजरिवालको अाम आदमी पार्टीको विश्वकिर्तिमान कायम गर्ने जित ! काङ्रेस अाइ लाई शुन्य सीट, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी पनि बढारियो !
दिल्ली बिधान सभाको ७० सीट मध्ये केजरिवालको अाम आदमी पार्टीले ६७ सीट, भारतीय जनता पार्टी मात्र ३ सीट, अरु सब जिरो सीट !!!